Diyaar ayaad u tahay inaad iibiso gurigaaga, laakiin gurigaagu iib ma u yahay iib?
Adeegso tilmaamaheena sare si aad gurigaaga ugu hesho xaalad iibinta ugu sarreysa…
Isku soo duub sariirta soo dhaweynta
Banaanka waa inuu dadka ku soo jiito gudaha. Cawska la jarjaray, deyrka nadiifka ah, ubaxyada cusub ee la beeray, iyo laga yaabee xitaa sanduuqa boostada ee cusub ama la cusbooneysiiyay, dhammaantood waxay abuuri karaan saameyn ugu badan iyaga oo aan jabinin bangiga.
Diyaar ayaad u tahay inaad iibiso gurigaaga, laakiin gurigaagu iib ma iibiyaa?
Diyaarinta Hanti kasta oo iib ah waxay dareemi kartaa inay tahay cabsi cabsi leh oo inta badan culus, hase yeeshe, farsamooyin yar oo fudud ayaa laga yaabaa in lagu sameeyo farqiga u dhexeeya helitaanka iibka. Hubinta gurigaaga ayaa lagu soo bandhigayaa iftiinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah kan ugu weyn ee kor loogu qaadi karo qiimaha iibka.
Adeegso tilmaamaheena sare si aad gurigaaga ugu hesho wararka iibka ugu sarreysa…
Banaanka waa inuu dadka ku soo jiito ilaalin. Cawska la jarjaray, deyrka nadiifka ah, ubaxyada cusub ee la beeray, iyo laga yaabee xitaa sanduuqa boostada ee cusub ama la cusbooneysiiyay, dhammaantood waxay abuuri karaan dadka ugu badan iyaga oo aan jabinin bangiga.
← Bilaabida Maalgashiga Hantida
Diyaar ma u tahay inaad guri iibsato? →